Tuugnimada Iyo Kamaradaha (CCTV) (WQ: Cali Cabdi Coomay) - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
Tuugnimada Iyo Kamaradaha (CCTV) (WQ: Cali Cabdi Coomay)
January 11, 2019 at 17:26 Tuugnimada Iyo Kamaradaha (CCTV) (WQ: Cali Cabdi Coomay)2019-01-11T17:26:38+00:00 MAQAALLADA
Kamaradaha casriga ah ee duuba muuqaalka ee lagu rakibo gudaha iyo dibada meheradaha, hudheelada iyo goobaha kale ee bushadu isugu timaado ee caasimada Hargaysa ayaa ah kuwa aanay inta badan ogayn bulshadu. Kamaradaha qaarkood waxa ay muuqaalka ka duubaan waddooyinka u dhow goobta lagu rakibay. Waxa aynu qormada ku xusi doonaa dhawr dhacdo oo looga faa’idaysay muuqaalka ay duubeen kamaradauhu oo u badan falal tuugnimo ah iyo kuwa kale oo khiyaamo la halmaala:
= Tuugtii Baabuurka Jabsatay: gaadhi ag-yaalay meherada ay ku rakiban yihiin karamadaha (CCTV) ayey koox dhallinyaro ciyaalo-xaafad ahi jabsadeen, markaasay kala baxeen Kombuyuutar dhal ah (Laptop) iyo alaabooyin kale oo dhexyaallay gaadhiga. Ninkii gaadhiga lahaa ayaa mar dambe yimid oo arkay gaadhigiisii oo la jabsaday. Ninkii meherada gaadhigu horyaallay ayaa u yeedhay ninkii gaadhiga laga jabsaday, markaasuu gudaha meherada ka tusay muuqaalkii ay kamaraduhu duubeen iyo sidii falku u dhacay. Ka dibna waxa si gaar ah kamaradii looga soo qaaday qaybtii duubtay falku markuu dhacayey, markaasaa mid kasta sawirkiisii lagu daabacay waraaqo midab leh si muuqaalkooda si fiican loogu aqoonsado, waxaana loo gudbiyey booliska. Booliskiina wakhtigaba iskagamuu lumin ee markiiba hawgal lagu soo qabqabanayo ayuu bilaabay. Waxaana si fudud loo soo xidhxidhay dhammaantood, iyaga oo weliba mid kastaa xidhan yahay dharkii uu falka ku geystay.
= Ninkii Moobilka Xoogga lagaga qaaday: Niman dhallinyaro ah ayaa wakhti habeen ah nin xoog kaga qaaday Tilifoonkiisii gacanta, meel shaaric ah oo bakhaar weyn hortiisa ah. Ninka way haraareeyeen waanay ka xoog bateen, isna dantiisa ayuu ka raacay oo muu dagaalamin ee si nabadgeliyo ah ayuu tilifoonkiisii u dhiibay. Aroornimadii ayuu ninkii bakhaarka haystay ka codsaday inuu muuqaalkii kamaradu duubtay uu ka eego bal inay kamaradu duubtay niman xalay tilifoonkiisii kaga qaaday bakhaarka hortiisa. Bakhaarlaha oo ahaa nin debecsan oo naxariis badan ayaa aqbalay codsigii, waana laga helay muuqaalkii. Ninkii moobilka laga qaaday, ayaa Memory Card ku qaatay muuqaalkii boolisku ayaanu u gudbiyey. Booliskii ayaa sawiradii daabacay, waxaanay isla aroornimadii suuqa badhtankiisa ka heleen laba ka mid ah kooxdii oo nasiib wanaag moobilkii aan weli faasixin, oo markaasuuna iib u raadinaaya. Halkii ayaa lagu qabtay labadii iyo moobilkiiba.
= Gabadhii Gogol-dhaafka Samayn Jirtay: Nink ganacsade ah oo safarkiisu badan yahay ayaa ka shakiyey xaaskiisu inay gogol-dhaaf samayso intuu safarka ku maqan yahay. Dabadeed xaaskiisii ayuu dalxiis ugu saaray dalka Itoobiya, markaasuu niman farsamoyaqaanno ah u diray inay gurigiisa gebi ahaan tiiba ku xidhaan kamaradaha (CCTV) waxaanu ku adkeeyey in aanay xaaskiisu arkin kamarada oo ay qariyaan inta suurtagal ah. Gurigiina meel kasta ayaa lagaga rikabay. Dalxiiskii markii isaga iyo xaaskiisii soo dhamaysteen ayey gurigii ku soo noqdeen. Ninkii ayaa maalintii ku xigtay qorshaystay inuu safar ilaa Dubaay ah u baxo, waxaanu ku maqnaa muddo dhan 7 cisho. Wuu soo noqday markaasuu la baxay Memory Card kamarada ku jiray oo duubay muuqaalkii 7 cisho.
Muuqaalkii waxa ka soo baxay nin dukaan ku haysta meel aan gurigiisa ka fogeyn oo xaaskiisa xidhiidh gogol-dhaaf ay la lahayd. Muuqaalka oo faahfaahsan oo markuu guriga soo galay ilaa intuu ku jiray ayuu ninkii muuqaalkii si fiican uga bogtay. Ninku nin degan ayuu ahaa bilowgii hore ninkii muuqaalka ku jiray ayuu soo xidhay, markaasuu kiiskii ka bilaabay maxkamadaha dalka. Ninkii dukaanka haystay uma baahna wax caddayn kale ah oo muuqaalka ayaa caddayn ah. Xaaskiisiina wuxuu ku amray inay gurigii aabaheed tagto oo ay gurigiisa u dhaafto isaga oo furitaankeediina go’aansaday.
Ninkii dukaanlaha ahaa muuqaalkii garsooruhu hordhigay muu dafirin ee wuu qirtay. Kiiskii ninku meel uu ku dambeeyey ma aqaano oo maan sii dabagelin iyo xukunka ku dhacay toona. Gabadhiinna wuu furay, markii sababta furitaanka ay weydiiyeen odayaasheedii wuxuu daawadsiiyey muuqaalkii, sidaasina way ku qanceen furitaankiina sidaasi ayuu u dhacay. Shakigii ninkaasi qaaday laba carruur ah oo ay u dhashay gabadhuna wuxuu soo baadhay hidde-sidaha (DNA), waxa se la caddeeyey inuu isagu dhalay. Dhacdadan waxa iig sheekeyey Qareenkii u doodayey ninkii dhibtu ku dhacday, hasayeeshee magacyada dhibanayaasha iimuu sheegin manaan xiisaynayn inuu ii sheego, qisada oo keliya ayuu ila wadaagay. Waxa keliya ee aynu uga soconay farriinta kamaradaha casrigani qaadayaan.
Previous articleWararka Caalamka Iyo Xogaha Bariga Dhexe | Muranka Turkeyga Iyo Maraykanka
Next articleSomaliland seeks recognition by hosting naval bases
« Chelsea Oo Heshiis Lagaartay Baddalka Cesc Fabregas.
Maurizio Sarri oo si kulul u weeraray kooxda reer Germany ee Bayern Munich »
Martial oo Ku Dhow In Uu Qandaraaska u Kordhiyo Kooxdiisa Man United.
RASMI: Barcelona oo shaacisay mudada uu garoomada ka maqnaanayo Ousmane Dembélé
Shaxa Rasmiga: Ganeo Vs Ac Milan Oo Lagu Dhawaaqay.
Ciyaaryahan hore ee kooxda Barcelona oo u jawaab celiyay Álvaro Arbeloa, kadib markii uu qaab jees jees ah kaga hadlay goolkii xalay ee Suarez
Alvaro Morata Oo Qarka U Saaran In Uu Dhamestiro Ku Biiritaankiisa Kooxda Atletico Madrid.
Barcelona Oo Si Lama Filaan Ah Ku Soo Qaadaneysa Kevin-Prince Boateng.
Waakuma Kooxda uu Ku Biiro Doono Chelsea Mise Man United Coutinho oo Ku Soo Laabanaaya Horyaalka England.
Barcelona Oo Xaqiijisay Mudada Uu Garoomada Ka Maqnaan Doono Dembele.
ARAG: Kala Sarreynta Gool dhalinta La Liga….(Weeraryahannada Saaxiibada ah oo Hogaanka isku heysta iyo Real Madrid oo xitaa….)
Dhageyso barnaamijka LIVE NOW (21 Jan 2019) Warar Update ah kaga bogo
Waa sidee kala sarreynta Gool dhalinta Premier League???
Cristiano Ronaldo oo diidan inuu qaado Talaabo uu horey u qaaday Lionel Messi
Saakay iyo waxyaabihii ay Wargeysyada ka qoreen Suuqa kala iibsiga Ciyaartoyda
Milan oo dardargelineysa xoojinta weerarkeeda, kuna dhow dhammeystirka heshiis la yaab leh!
Valverde oo ka hadlay guushii ay xalay ka gaareen Leganes iyo dhaawaca soo gaaray Ousmane Dembélé
Goormee ayuu Higauin dhammeystiri doonaa ku biiristiisa kooxda Chelsea?
“Manchester City uma qalmin in ka badan 3 gool” – Guardiola oo fariin cad u diray ciyaartoydiisa
Arsenal oo si la yaab leh ugu dhaqaaqday xiddig ka tirsan A. Madrid, iyo Chelsea oo ka caawineysa saxiixiisa!
Ilaa goorma ayaa la filayaa in Garoomada uu ka maqnaanayo Ousmane Dembélé?
Muddo intee la eg ayuu qaadan doonaa dhaawaca Bellerine?
Neymar Jr oo ka hadlay wararka lala xiriirinayo inuu ku biiri doono kooxda Real Madrid
Garsoore hore ee horyaalka Premier League oo DIGNIIN kulul u jeediyay Mohamed Salah
Mesut Ozil oo FARIINTAN la wadaagay Saaxiibadiisa Arsenal
Shaxda rasmiga ah ee kooxaha Barcelona vs Leganes
LALIGA: Safafka Rasmiga Ah Ee Kulanka Barceloa Vs Leganes, Xilli Uu Messi Kaydka Fadhiyo.
Xidigaha Danilo iyo Leroy Sané oo siyaabo kala duwan kaga hadla guushii ay maanta ka gaareen kooxda Huddersfield
Tababaraha AC Milan Gattuso oo si dadban u Xaqiijiyay in Higuain uu ku biirayo Chelsea
Anthony Martial Oo Qandaraaska U Kordhinaya Man United.
Tababare Allegri Oo Cristiano Ronaldo Ku Eedeeyay In Uu Sabab U Yahay Gool Dhalin Yarida Paulo Dybala.
Real Madrid Oo Man United Iyo Chelsea Kaga Adkaatay Saxiixa Laacibkan.
Wasiirka Arrimaha Gudaha oo la kulmay safiirka Turkiga ee Somaliya